मेरी बहिनी | मझेरी डट कम
editor — Thu, 07/31/2014 - 03:25
हाम्रो खानदानभन्दा ठूला खानदानबाट बहिनीको लागि हात माग्न आए, आमाले अमिलो मन बनाउँदै मान प्रसाद काकालाई अगाडि सार्नुभयो । आमाको मन छोरी बिहे गरेर दिनभन्दा पनि पहिला मैले छोरी दिएँ पनि भन्न नसकेर कति बोझिलो हुँदो रैछ भन्ने मैले अनुभूति गरें, अँझै म पनि त एउटै थालमा खाएर हुर्केको उसैको दाइ थिएँ । यो त झरनाबाट झर्ने पानीको जस्तो पीडा रहेछ जस्तो कि पानीलाई तल बजारिएर दुख्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि आकाशबाट पातालमा बज्रिनु परे जस्तै हामी आमा छोरा त्यसै गरी बज्रिएका थियौँ । ज्योति त घरमा थिइन साथीको घरमा गएकी थिई, मैले केटा पक्षलाई कम से कम बहिनीको के बिचार छ त्यो त सोधौँ, उसका पनि कुरा होलानभन्दा पनि मान प्रसाद काकाले मेरो मुखमा बुजो कोचार्नुभयो अनि म पनि अवाक भएँ । मलाई यो पारा बोल्न नसके पनि कत्ति मन परेन, केटा पक्षका मान्छेसँग काकाले केके चोचोमोचो गर्नुभयो खास खुस गर्दै त्यति खास बुझिएन । कुरो चिना मिलाउने अनि दिन घर्याउने भन्ने रैछ सबै जना माइलाबा कहाँ गए, घरमा आमा र म मात्रै थियौँ त्यसै बेला बहिनीले दुई चुल्ठा कपालमा रातो रिवन हल्लाउँदै पिँढीमा आएर बसी लैनी पल्टेर आमाको नजिकै, आमा भित्ता फर्केर डाँको छोडेर रुनु भयो अनि म पनि सहन नसकेर बारीतिर हानिँएँ ।
सञ्जोगले त्यसै बेला ज्योतिकी भाउजू पनि माइत गएकीले उसलाई पनि सोध्न पाइएन, सबै खटन पटन मान प्रसाद काकाले मिलाउनु भएको थियो । बेहुलालाई दिने सुन, कपडाहरू अनि सासू अमाजुहरूलाई नन्दहरूलाई तथा परिवारका वल्ला पल्ला घरका आफन्तलाई कुटुम्बलाई केके गर्ने भनेर उनीहरूसँग बसेर काकाले सबै कुरा मिलाई सक्नुभएको थियो । उति सारो पैसा थिएन हामीसँग अनि आमाले इज्जत राखिदिनु पर्यो बरु तल्लो बारी हुर्याइदिउँला नसके भन्नु हुन्थ्यो । ज्योतिकी भाऊजु पनि आई अनि बिहको कुरो मलाई नसोधि गरिस भनेर घरभरी काकोहोलो मच्चाई अनि उस्का बालाई बोलाउन पठाई, झन थपिएर मान बहादुर काकाले मिलाउनु भएको खटन पटन सबै उल्टयाउने गरी आफै हालि मुहाली गर्न थाले व्यवस्थाहरू बिगार्न थाले । मलाई कत्ति पनि पचेन त्यो खटन पटन मेरै घरमा आएर हाम्रै बिरुद्धमा खनिएको देखेर तैपनि अन्तिमसम्म त सहेकै थियौँ । ससुरा भनाउँदाले घरबाट बिहा गर्न हुन्न खुरुक्क मन्दिरमा लगेर टिको लगाइदिने अनि पठाइदिने भन्न थाले ।
एकातिर आमा रुने अर्कोतिर बहिनी रुने तैपनि उनीहरूको ज्यादती बीस को उन्नाइस नहुने देखियो अनि आफ्नो इज्जतका खाँतिर पनि मैले बोल्नु पर्ने भयो । मैले पनि मेरो स्वाभिमानमा र हैसियतमा हमला भएको देखेर मुखै खोल्नु पर्यो । यो मेरो घर हो मैले आजसम्म केही भनेको छैन हजुरहरूलाई्र । हजुरहरूको सम्मानमा कुनै कमी हुन दिएको छैन तर मेरै घरमा आएर हजुरले हालीमुहाली गर्न मिल्दैन, यो मेरो घर हो यसमा हाम्रो कुरा चल्छ हजुरको कुरा आफ्नै घरमा चलाउनु होला भनेर के भनेको थिएँ बाऊ छोरीका अवतार देखिए अँझै ससुराबालाई देखाउँदै श्रीमतीले यो त मेरो पनि आधा हो भन्न पनि बाँकी राखिन । तर पनि मैले कुनै वास्ता गरिन आफ्नो कुरामा अडिग रहेँ । भोलिपल्ट बाउले छोरी च्यापेर घरतिर लागे मैले केही बोलिन । श्रीमतीलाई मैले भनेँ तिमीले आफ्नो र अर्को छुट्टाउन नसक्ने मोती बिन्दु भएको रहेछ, पहिले आफ्नो मनको आँखा खोलेर आउनु अनि बल्ल छर्लङ्ग हुनेछ । तिमीले जस्तो व्यवहार गरे पनि जस्तो अवतार देखाए पनि मैले तिमी प्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याएको छैन तर यसभन्दा पनि अगाडि बढेर आफ्नै परिवारको बारेमा नराम्रो सोच्यौ भने म र यो परिवार जति नराम्रो तिम्रो लागि कोही हुने छैन भनेँ त्यस पछि केही नबोली दुवै जना ओझेल परे ।
त्यसको हप्ता दिनमा उसका माइतीहरू ८ - १० जना नै हुल बाँधेर आएर र मलाई र आमालाई केर कार पार्न थाले । अर्कि केटीतिर लागेर मेरी छोरिलाई यस्तो व्यवहार गरिस भन्न पनि पछि परेनन । मुखमा आएको तथानाम बोले, मलाई कुटुम्बको सीमाबाट बाहिर गएर बोल्न थालेपछि मैले पनि तिमीहरूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यही गर भनिदिएँ । अब देखि मलाई तिमीहरूकी छोरीसँग नाम जोडेर बोल्ने तिमीहरूको कुनै हैसियत बाँकिरहेन अब । मेरो सदासयताको, सरल पनको फाइदा उठाएको तिमीहरूले ? मेरो कुरा सकियो भनेर काकाको घरतिर लागेँ सहिनसक्नु भएर ।
सबै कुरा अब भनेर फाइदा पनि छैन किनकि कमसे कम मैले ज - जसलाई आफ्नो जीवनमा जुन धारणा राख्दछु, हजुरहरूले पनि उस्तै धारणा राख्नुहोस भन्ने चाहँदिन अहिले पनि म । अरुले गलत गरे भनेर म पनि उनीहरू जस्तै हुनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन दाजु, त्यसैले साह्रै झिना मसिना कुरा भन्दिन मलाई माफ गर्नु होला । विवाह भन्ने कुरा मन मिलेपछि गर्ने कुरा रैछ तर मलाई त आफ्नो विवाह छिनेको पनि थाहा भएन । तैपनि हजुरहरूको खुशीको लागि मैले कुनै नाईँ नास्ती गरिन र आफ्नो दुख पनि लुकाएँ भरसक ।
कथाले पाठकलाई राम्रो सँग
अतिथि (not verified) — Thu, 07/31/2014 - 16:04
कथाले पाठकलाई राम्रो सँग बाँधेर राख्न सकेको छैन
म निकै भावुक भएं, उत्कृष्ठ
देव (not verified) — Wed, 04/01/2020 - 00:10
म निकै भावुक भएं, उत्कृष्ठ कथा!
कीर्तिपुर, पानी र लाजहरू